Ogaden News Agency (ONA) – Xoghayaha Guud ee OYSU oo Gudigiisii Fulinta Magacaabay
Xoghayaha Guud ee OYSU oo Gudigiisii Fulinta Magacaabay
Ramadaan Kariim dhamaan Bulshada Somalida Ogadenia meel kastood joogtaanba.
Kadib kalfadhigii ururka Midawga Dhalinyarada & Ardayda Ogadenia (OYSU) ee magaalada San Diego ee wadanka Maraykanka kadhacay intii udhaxaysay 22-27 May, 2013, falanqayn & fikir iswaydaarsi badan kadib waxaa lagu go,aamiyay kalfadhigaas Xeer-Hoosaadka iyo Qorshe-Hawleedka ururka isla markaana waxaa lagu doortay Xoghayaha Guud ee urur-waynaha OYSU oo xilka hayn doona sadexda sano ee soosocota haduu eebuhu yiraahdo kaasoo uu kuguulaystay Mudane Mujaahid Shekh Ibrahim Cabdalla. Dooraahada Xoghayaha Guud ee ururku waxay siwanaagsan ooga dhacday 42-urur hoosaad oo kahawlgala dunida dacalladeeda.
Hadaba wadatashiyo iyo xidhiidh badan oo lalasameeyay hay,adaha kala duwan ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO), Hawl-Wadeenka Jaaliyaadka Ogadenia, Ururada Bulshada, Masuuliinta Urur-Hoosaadyada OYSU iyo Aqoonyahanka Somalida Ogadenia, waxaa sikalsooni leh oo loowada dhanyahay la,iskugu raacay dhismihii iyo sooxulistii Maamulka Sare ee ururka OYSU hogaanka uqaban lahaa sadaxda sane ee soosocota Haduu ee ubuhu yiraahdo.
Dhanka kale waxaa mudo kooban lagu soo dhamaystiri doonaa haduu eebuhu yiraahdo guud ahaan hay,adaha & maamulka hoos yimaada ama lashaqayn doona masuuliintan lamagacaabay kuwaasoo larajaynayo inay wax badan kabadali doonaa dardar cusubna kusoo kordhin doonaa gaba ahaanba waxqabadka iyo horumarinta urur-waynaha OYSU. Waxaan shaki kujirin inay maanta dhalinyaradu tahay cududa oogu xoogga badan ee Halganka shacabka Somalida Ogadenia oogu jiro sidii heeryada Gumaysiga Itoobiya looga hoos bixi lahaa.
Masuuliintan cusub ayaa lagusoodoortay Aqoon, Karti, Bisayl iyo waliba shaqo wanaag ay kadhaxleen khibrada iyo waayo aragnimaday uleeyihiin Halganka Somalida Ogadenia oogu jirto siday ooga xoroobi lahaayeen Gumaysiga Itoobiya ee kuraagay Ciida Hooyo mudada dheer. Waxan sinaxariis iyo xushmadi kudheehantahay ooga codsanaynaa dhamaan Hay,adaha kala duwan ee JWXO iyo Bulshada Somalida Ogadenia dibbadda iyo guddeba meelkastooy joogaan inay sihagar la,aan ah gacan buuxda kasiiyaan gudashada waajibaadka loo igmaday masuuliinta cusub ee ururka OYSU.